Dowlada Kenya oo Markii ugu horeysay ka hadashay Afduubyada Dalkeeda ka dhacay – SBC
Dowlada Kenya oo Markii ugu horeysay ka hadashay Afduubyada Dalkeeda ka dhacay
Wasiirka Amniga ee Dalka George Saitoti ayaa sheegay in Dowladoodu ay adkeyneyso Amaanka guud ee wadanka gaar ahaana xuduuda dhinaca beriga ee ay wadagaan Dalalka Kenyaiyo Soomaaliya.
Hadalka wasiirka amniga Kenya ayaa imanaya xilli dhawaan kooxo hubeysan ay afduub u geysteen laba qof oo reer galbeed ah kooxo maleeshiyaad soomaali ah kuwaasi oo aan ilaa iyo iminka la ogeyn halka ay si rasmi ah ula aadeen.
George Saitoti waxaa uu amar cad ku bixiyay in dhamaan wixii gadiid badeed ah ee soo galaya wadanka Kenya ay hubin doonan Saraakiisha laamaha Socdaalka ee wadanka iyaga soo maraya costoms-ka loogu talagalay ka hor inta aysan wadanka soo gelin.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxaa uu xusay in dooni kasta oo ka hortimaada amarka ciidamada eek u aadan inay joojiyaan oo hubiyaan ay ka qaadi doonan taalabo adag oo ay ka mid tahay inay burburin doonan.
Sidoo kale wasiirka Amniga ee Kenya George Saitoti waxaa uu sheegay in laba k amid ah saraakiisha Ciidamada Badda eeKenya ay ku waayeen badda ka dib markii doonidii ay la socdeen ay ku qalibantay badweynta iyaga oo baacsi ku haya haweeney faransiis ah oo laga afduubtay deegaanada lo dalxiis tago ee wadanka.
Geesteeda kalena waxaa uu dibad bax baalaaran ka dhacay Deegaanka Luma ee Wadanka Kenya iyadoo halkaasina ay iskugu soo baxeen Boqolaal dadka deeegaanka ah kuwaasi oo dowlada ku eedeyey inay xaqiijin weyday Amaanka Dalka gaar ahaan xuduuda ka dib afduubyadan dhacay.
Boqolaalka dad ee iskugu soo baxay wadooyinka deegaanka Luma ee wadanka Kenya ayaa ka dalbaday iskaashi caalami ah Dowlada Britian iyo French oo ku aadan in si wadajir ah looga hortago Afduubyadan.
“Ciidamada BooliiskaKenya waa in anaga ayna shaqaaleysiiyaan si aan u ilaalino dhinaca biyaha maxaa yeelay waan dabaalan karnaa waanuna naqaana deegaanka ” sidaas waxaa yiri Pius Ndung’a oo ah mid ka mid ah shaqaalaha Shirkada Dhismaha ee Dalkaasi ka howlgala
Dadka Hotelada ku leh deegaanada Dalxiiska ee Dalka Kenyaayaa waxaa ay sheegeen inay dareemayaan in dad badan oo dalxiiska inay iska kansaleen safaradoodii dalxiiska oo ay halkaasi ku imaan lahaayeen taasina ay sababatay digniinaha dowladaha qaar ay siiyeen Muwaadinintooda oo ku aadan inaysan aadin Deegaanada dalxiiska ee Kenya.